Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.9 Ụcha
Big data isi mmalite nwere ike kwajuru na junk na spam.
Ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta kwenyere na nnukwu ihe ọmụma data, karịsịa ebe nrụọrụ weebụ, dị mma n'ihi na ha na-anakọta na-akpaghị aka. N'ezie, ndị na-arụ ọrụ na nnukwu data data maara na ha na-abụkarị unyi . Ya bụ, ha na-agụnyekarị data ndị na-adịghị egosipụta ezi omume nke mmasị ndị na-eme nchọpụta. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụkarị maara usoro nke nhichapụ data nyocha nke ọha na eze, ma nhichapu nnukwu isi iyi data yiri ka ọ siri ike. Echere m na isi iyi nke nsogbu a bụ na ọtụtụ n'ime nnukwu data ndị a abụghị nke a ga-eji mee nchọpụta, n'ihi ya, a naghị achịkọta ha, echekwara ha, ma debe ha n'akwụkwọ iji mee ka nhichapụ data dị.
Ihe ize ndụ nke nchịkọta ihe ntanetị rụrụ arụ bụ nke Back na ndị ọrụ 'gosipụtara (2010) amụ banyere mmetụ mmetụta uche na mmegide nke September 11, 2001, nke m kwuru na mbụ na isi. Ndị na-eme nchọpụta na-amụkarị nzaghachi maka ọdachi ndị na-eji data eleghachitere na nchịkọta ọnwa ma ọbụ ọbụna afọ. Ma, azụ na ndị ọrụ ibe chọtara ihe ntanetị nke dijitalụ-oge timestamped, ozi ederede na-akpaghị aka site n'aka ndị ọrụ American-85,000-nke a nyekwara ha aka ịmalite ịzaghachi mmetụta uche na oge kachasị mma. Ha kere usoro iheomume nkeji nkeji nke Septemba 11 site n'iji ọdịnaya nke okwu ndị metụtara (1) mwute (dịka "mkpu" na "iru újú"), (2) nchegbu dịka "nchegbu" na "egwu"), na (3) iwe (dịka, "ịkpọasị" na "oké egwu"). Ha chọpụtara na iru uju na nchegbu na-aga n'ihu n'ụbọchị ahụ n'enweghị usoro siri ike, kama na enwere mmụba na-arịwanye elu na iwe n'ụbọchị. Nchọpụta a yiri ka ọ bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ike nke isi mmalite data: ọ bụrụ na a na-eji isi mmalite data eme ihe, ọ gaghị ekwe omume ịnweta usoro nhazi dị otú ahụ dị elu nke nzaghachi ozugbo na ihe omume a na-atụghị anya ya.
Otú ọ dị, nanị otu afọ mgbe e mesịrị, Cynthia Pury (2011) ji nlezianya leba anya na ya. Ọ chọpụtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị a na-ewere na iwe iwe sitere na otu pager na ha niile yiri. Nke a bụ ihe ndị a sịrị na iwe ji iwe kwuru, sị:
"Reboot NT igwe [aha] na kabinet [aha] na [ebe]: oké egwu: [ụbọchị na oge]"
Akpọrọ iwe ndị ozi a n'ihi na ha gụnyere okwu ahụ bụ "Ọgụgụ," nke nwere ike na-egosikarị iwe ma na nke a, ọ bụghị. Iwepụ ozi sitere na pager a na-azụghị aka kpamkpam wepụrụ kpam kpam iwewanye iwe na oge ụbọchị (nọmba 2.4). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, isi ihe dị na Back, Küfner, and Egloff (2010) bụ ihe dị mkpa nke otu pager. Dị ka ihe atụ a na-egosi, nchọpụta dị nro nke data dị mgbagwoju anya na nke nwere nsogbu nwere ike ime ihe ọjọọ.
Figure 2.4: Atụmatụ a na-ewe iwe n'izu nke September 11, 2001 dabere na 85,000 American pagers (Back, Küfner, and Egloff 2010, 2011; Pury 2011) . Na mbụ, Back, Küfner, and Egloff (2010) kọrọ otu usoro nke iwewanye iwe n'ụbọchị. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ n'ime ozi ndị a yiri iwe si n'aka otu onye na-ezigara ozi na-esonụ: "Meegharịa NT igwe [aha] na ụlọ ọrụ [aha] na [ebe: CRITICAL: [date and time]". Site na ozi a wepụrụ, o doro anya na iwe na-abawanye (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . E si na Pury (2011) , nke bụ 1b.
Ọ bụ ezie na data ruru unyi nke e kere n'amaghị ama-dị ka nke ahụ site na nke na-eme ka pager-nwere ike ịchọta ya site na onye nyocha nke ọma, e nwekwara ụfọdụ usoro ntanetị nke na-adọta ndị spammers. Ndị a spammers na-arụsi ọrụ ike ịmepụta data adịgboroja, na-emekarị ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ ego na-arụsi ọrụ ike iji zoo ha. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Twitter yiri ka ọ gụnyere ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ spam dị mgbagwoju anya, nke na-eme ka ụfọdụ ihe ndị metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri aka ha mee ka ndị mmadụ mara karịa karịa ha (Ratkiewicz et al. 2011) . O di nwute, iwepu azu ojoo a nwere ike isi ike.
N'ezie ihe a na-ewere dị ka ihe ruru unyi nwere ike ịdabere, n'akụkụ ụfọdụ, na ajụjụ nchọpụta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ bọtịnụ na Wikipedia ka e ji bots bọta (Geiger 2014) . Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na gburugburu ebe obibi nke Wikipedia, mgbe ahụ, ndozi ndị a bot-kere dị mkpa. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otú ụmụ mmadụ si etinye aka na Wikipedia, mgbe ahụ, a ga-ewepụ ihe ndozi nke bot-kere.
Enweghị usoro nyocha ọ bụla ma ọ bụ ịbịaru nso nwere ike hụ na ị kwadochala ihe ruru unyi. Na njedebe, echere m na ụzọ kachasị mma iji zere ịghọ aghụghọ site na ihe ruru unyi bụ ịghọta ihe dịka o kwere mee banyere otu e si kee data gị.